Saaxiibtinimada – Kaasho Maanka
Qoladiinnan akhriska iyo falsafaddaba jecel waxa aan halkan idin kula wadaagayaa sheeko ka mid ah tobonnaankii sheeko ee laga wariyay Faylasuufkii Soqraad. Waa wada sheekaysi dhex maraya isaga iyo labo barbaar oo ay isku magaalo yihiin. Sida caadada ah marka ay doodi furmayso waa in ay jirtaa kala duwaansho ku saabsan madwuuca laga hadlayo. Halkan, waxaa looga doodayaa mawduuc aynnu u wada malaynayno in aynnu ka dheregsan nahay, balse marka aad doodda dhex gasho waxa aad ogaanayso sida aad uga maran tahay. Keligaana ma ahan taasi ee Soqraad laftirkiisa ayaa kula qaba middaas, oo dooddani waxa ay dhammaanaysaa iyada oo aan natiijo la isla yaqaan laga gaarin. (Inta la ogyahay wax yar ayay dhacday in ay dhammaato dood uusan natiijo ama Conclusion ka gaarin Soqraad).
Mawduuca ay dooddani ku saabsan tahay, xiiso badan agteenna kuma lahan wakhtigan aynnu joogno, oo waxa casrigeenna aad looga doodaa jacaylka iyo guurka, marka laga hadlayo xiriirrada bani’aadamka dhex mara. Labadaas ayaa casrigeenna aad loo gorfeeyaa ama wax looga qoraa, balse sida ay buuggaagta ama sheekooyinka jacaylka ku saabsan casrigeenna u badan yihiin, ayaa mawduuca Saaxiibtinimaduna ugu badnaa sheekooyinka dadkii hore.
Kelmadda “Saaxiib” waxa ay maanta inoo leedahay macno ka duwan ama ka fog midkii ay u yaqaanneen dadyowgii innaga inaga horreeyay. Falsafaddii anshaxa (Moral Philosophy) ee Giriigga iyo tii Roomaanka waxaa aad ugu badnaa mawduuca saaxiibnimada. Sabataas daraadeed ayay kelmaddu inooga dhadhamaysaa wax gaboowday oo aan casrigeenna saamayn ku lahayn. Qofkii maanta ka hadla waxa uu inoogu muuqanayaa sidii qof ka hadlaya wax aan jirin ama aan macno badan lahayn.
QORMO LA XIRIIRTA: Indho-Shareerka Jahliga
Halkani, dooddu waxa ay ku bilaabanaysaa Soqraad oo labada wiil midkood waydiinaya bal in uu u sheego “Saaxiibnimadu waxa ay tahay?” Nebi Muuse iyo Eebbe saaxiib ayay ahaayeen, goorma ayay bilaabatay saaxiibtinimadoodu? Ma markii uu Eebbe Muuse jeclaaday mise markii uu Muuse Eebbe Jeclaaday? Mise mid kaliya ayaa kan kale jeclaaday? Haddii ay jawaabtu midda u dambaysa tahay, labadooda keebaa saaxiib ah, ma kan wax jeclaaday mise kan la jeclaaday, mise isu gaynta labadoodaba?
Jawaabta laga bixiyo su’aashan waa ay ku adkanaaysaa Soqraad in uu ku qanco. Waxa ayna u baahanaysaa in si qoto-dheer loosii baaro arrinta. Soqraad ayaa waxaa maskaxdiisa ku soo dhacaysa murtidii ahayd, “Shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa” oo ka dhigan labadii isku mid ah ayaa saaxiibi kara. Talyaaniguna waa iyaga ku maahmaaha “Ii sheeg saaxiibkaa aan qofka aad tahay kuu sheegee” Eebbana waa kii Quraanka ku yiri, “Naagta dhillada ah nin la mid ah ayaannu u guurinaynaa.”
Durba dooddani waa ay beenoobaysaa, waayo waxa aynnu aragnaa qof wanaagsan iyo qof xun oo saaxiib ah. Sidoo kale waxa aynnu aragnaa isku mid ahaanshuhu in uu yahay waxa dhaliya nacaybka iyo xinka. Gabyaagu waa uu neceb yahay gabyaaga kale. Heesaagu waa neceb yahay heesaaga kale. Dhakhtarku waa uu neceb yahay dhakhtarka kale. Taas badalkeeda, gabyaagu waxa uu jecel yahay qofka aan gabyin. Dhakhtarku waxa uu jecel yahay bukaanka. Heesaaguna waxa uu jecel yahay qofka aan heesi karin.
Mar kale ayay dooddu madaxa isla galaysaa, dhan loo saarana waa la garan waayayaa. Balse, waxa ay ku biyo shubanaysaa isku mid ahaanshaha iyo kala duwaanshaha midna in uusan keenin saaxiibnimada, balse qof waliba raadiyo waxa ka maqan. Waxaa la yiraahdaa “Shay waliba meesha uu ka maqan yahay ayuu aadaa. ”Kulaylku qabowga ayuu aadaa, qabowguna kulaylka ayuu aadaa. Sidaa awgeed labada ugu saaxiibsan waa qabowga iyo kulayka, qallaylka iyo qoyaanka. Waa halkii laga yiri, “Nin bur haysta iyo nin biyo haysta waa isu baahan yihiin”.
QORMO LA XIRIIRTA: Taariikh nolaleedkii Baruch Spinoza
Halkaas marka ay dooddu marayso ayay su’aal kale maskaxdiisa kusoo dhacaysaa, waxa uu iswaydiinayaa: Horta saaxiibtinimadu ma wax aynnu isaga baahan nahay baa, mise ujeeddo ayaynnu ugu baahan nahay ayaa jirta? Tusaale ahaan lacagta lacag ahaanteeda ugu ma baahnin ee wax aynnu u baahan nahay daraadood ayaynnu ugu baahan nahay. Wax walba haddii ay bilaash yihiin maxaynnu lacag uga baahan nahay? Sidaas daraadeed qofka xun waxa uu qofka wanaagsan ula saaxiibaa in uu qof wanaagsan noqdo.
Isku soo duub oo saaxiibtinimadu waa labo jir oo wadaaga qal qalbi iyo hal dareen. Saaxiibku waxa uu u sameeyaa saaxibkiis waxa uusan naftiisa u samayn karin. Waxa la taliyaa wakhtiga uu u baahan yahay. Waxa uu la joogaa marka xitaa hooskiisu ka haro. Waxa uu dhiniciisa joogaa marka adduunyada oo dhani ay ka soo horjeeddo. Murugadiisa waa uu yareeyaa oo labo ayuu u qaybiyaa maxaa yeelay isaga ayaa la qaybsada, farxaddiisana waa uu labo jibaaraa, maxaa yeelay isaga ayaa la wadaaga. Guushaadu xin iyo xaasidnimo midna ma galiso, sidoo kalana kaaga ma xumaado haddii aad kun saaxiib oo kale yeelato. Saaxiibadu ma ahan kuwa mar walba wada jooga, ee waa kuwa wada jooga wakhtiga ay duruufto joogtu.
Horey usocda m.a
Jinka iyo dadka kee qurux badan?
nta aynaan jinka iyo dadka ka faalloon waxa aynu xoogaa ka taabanaynaa geela oo ah xoolaha nooca ugu sharaf badan, uguna macquulsan. Geela rati ama awr xoog yar oo foolxumi ma abaahiyo. ”Abaahi” waa galmada geela. Dabeecadda ayaa keentay in uu geela dhaddig abaahiyo rati xoog, dhiirranaan iyo qurux isku darsaday. Geela abaahidiisa waa loo halgamaa oo ratigii halganka ku guulaysta ayaa dhammaan...
Caddaalad in la sameeyo laba Cali oo isku diida lama arko lkn sidee baan caddaalad u samaynaa oo wax u kala qaybsannaa ayay waligeed dooddu ka taagnaan jirtay. Dadka marka la yidhaahdo caddaalad sameeya midba meel buu ula kacaa oo midbaa qabiil laandheere ah ka dhashoo qabyaaladda xoojiya, midbaa taajir ahoo hantiilayaasha xaqa u badiya. Midbaa intuu isaga xoog is bido yiraahda ninka roon reerka...
W/Q: Cawil Cabdille 14th February 2019
Dhimashadii ‘Eebbe’ iyo Dhambaalkii ruuxa is-dhimani siday!